Madaxweyne Florentino Perez oo ka quustay xilli ciyaareedka Real Madrid – The Voice of Northeastern Kenya
Posted in CIYAARAHA
Madaxweyne Florentino Perez oo ka quustay xilli ciyaareedka Real Madrid
Star FM February 3, 2018
Madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez ayaa wuxuu isku diyaarinayaa inuu kooxda nadiifin weyn ku sameeyo ciyaartoyda ay heysato xagaaga soo aadan, sida ay sheegayaan warbaahinta Spain.
Real Madrid ayaa haatan xilli ciyaareed xun ku jirta, iyadoo ku guuldarreysaneysa difaacashada horyaalka La Liga, waxayna ku jirtaa kaalinta 4aad xilli ay 19 dhibcood ka dambeyso hogaamiyeyaasha Barcelona.
Madaxweyne Florentino Perez wuxuu doonayaa inuu isbedello muuqda ku sameeyo Los Blancos xagaagaan. Shabakadda dalka Spain ee Don Balon ayaana sheegeysa inuu Florentino Perez durba bilaabay qorsheyaasha uu kooxdiisa uga dhigayo mid dhammeystiran.
Florentino Perez ayaana xitaa aaminsan inuu qalad weyn sameeyey markii uu diiday inuu dhiig cusub kusoo daro kooxdii Real Madrid ee xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay isku qaaday La Liga iyo koobka UEFA Champions League.
Madaxweyne Perez ayaa wuxuu ku qasbi doona tababare walba oo xilli ciyaareedka soo aadan maamulaya Los Blancos inuu fursad siiyo ciyaartoyda kasoo baxday akadeemigga kooxda.
Balse shabakadda Don Balon ayaa sheegeysa inuu sidoo kale fasixi doono xiddigaha uu u arko kuwo aan saameyn ku laheyn kooxda, halka xiddigaha fursadda u baahan fursad la siin doono.
Nacho iyo Lucas Vazquez ayaana ka mid ah ciyaartoyda ka faa’iideysan doona tallaabada uu qaadayo madaxweyne Perez, oo diyaarinaya qorsheyaasha kooxdiisu ay ku wajaheyso xilli ciyaareedka soo aadan.
← Atletico Madrid oo dooneyso in qorshaha Barcelona lagu daro Dembele
Arsenal oo xujo hor dhigtay Ozil →